Waxaa Walii Socda Qaban Qaabada Shirka Muqdisho. – STAR FM SOMALIA
Saacadaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in Gudaha Xerada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho in uu ka furmo Shirka u dhaxeeya Madaxda Dowladda, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Madaxda ka qeyb galeysa Shirka qaarkood ayaa halkaasi gaaray, sida Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, waxaana sidoo kale la filayaa in goordhow ay halkaasi tagaan Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in uu jiro shaki ah in aysan shirka tegin Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland walow Xubnaha Beesha Caalamka ay cadaadis saarayaan dhinacyada la doonayo inay shiraan.
Amniga Xerada Afisiyooni oo uu shirka ka furmayo ayaa waxaa damaanad qaaday howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kadib markii ay dalbadeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.